Hevitra MPANOHARIANA | Andavanandro | 13
Nandalo Zafy Albert: Vaky ny fonjaben'i Tsiafahy![updated]
2009-01-04 @ 10:49 in Andavanandro
Soa ihany, na dia zava-dratsy aza no nahafantarana azy fa, heno hoe nandalo teny amin'ny fonjaben'i Tsiafahy ny filoham-pirenena teo aloha tamin'ny faran'ny taona teo. Ny toe-javatra notaterin'ny gazety manko dia hoe nipoaka tao anatin'ny fonja ny basin'ny mpiambina ny filoha teo aloha Zafy Albert. Gaga ny rehetra! Nahoana no tafiditra tao anatin'ny fonja ny basin'ny mpiambina ny filoha nefa dia oarara tanteraka izany?
Nanomboka tamin'ny namakiako io vaovao nipoahana basy io dia efa niandry fotsiny ny fahavakisan'ny fonja aho ary dia tontosa izany androany alahady maraina 04 janoary 2009 tamin'ny telo ora. Tena miala tsiny raha nampifandrayireo toe-javatra roa ireo satria izay no lojika tao anatiko tao na dia efa talohan'ny fahavakisana aza... noho ireny fahavakisana efa nisesisesy tetsy sy teroa ireny! Sarotra ho ahy koa noho izany raha tsy nampifandray ity toe-javatra ity ami'ny toe-draharaha politika mety hitranga atsy ho atsy! Tsy nisy nolazaina ny mombamomba ireo 21 nandositra, nisyy oatifitra nandritra ny fitsoahana fa mbola misy 16 no miriaria any ho any!
toy izao io lahatsoratra io:
Taitra ny rehetra, na ireo gadra na ny mpiandry fonja, hatramin'ireo mpamangy naheno ny poa-basy tokana nirefotra tao amin'ny fonjan'i Tsiafahy ny 31 desambra lasa teo, tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro. Miaramila iray no voatifitra teo amin'ny takibany. Basin'ny mpiambina an'i Zafy Albert tonga namangy- tao an-toerana ity nipoaka ity.
Araka ny fanazavana, niaraniditra tamin'ny profesora Zafy tao amin'ny fonja ny mpiambina azy izay nahazo alalana hitondra ny basiny, na dia tsy tokony hisy fitaovam-piadiana tafiditra aza ao anatiny. Nifampiresaka tamin'ny miaramila iray namany ity mpiambina nanana basy ka taorian'ny resaka nifanaovan'izy ireo no nirefotra ny basy. Tsy nisy nahita mazava izay tena nitranga ny rehetra, na ny tompon'andraikitra tao amin'ny fonja na ingahy Zafy Albert, fa ny basy efa latsaka teo amin'ny tany no tazan'izy ireo taorian'ny fipoahana.
Nalefa teny amin'ny Hjra avy hatrany ilay naratra. Avotra soamantsara izy ary afaka ny bala tafiditra teo amin'ny takibany. Taorian'izay no nahalalana fa latsaka ilay basy ary izay no nampipoaka azy ary nandratra olona tsy nahy. Mifankahalala rahateo ireo miaramila roa ireto, ny iray mpiambina an'i Zafy Albert ary ny faharoa mpiambina ao Tsiafahy. Mara-nianatra izy roa lahy, samy zandary kilasy faharoa.
Marihina fa saro-pady ary avo lenta ilay basy nipoaka, marika Tamas. Olona manokana vao afaka mampiasa azy.
Tonga teny amin'ny fonjan'i Tsiafahy ny androtr'io ihany ny tompon'andraiki-panjakana nizaha ny zava-misy. Efa ny 1 janoary tamin'ny 3 ora maraina izy ireo vao niala teny an-toerana. Mandeha ny famotorana...
Yves S. (Mariho fa 2 janoary 2009 ity gazety Taratra nanatsoahako ny vaovao ity)
Ireo Minisitra telo notendrena Androany alahady moa dia avy amin'ireo efa teo ihany dia: Atoa Bezary manase (fanapariaham-pahefana) sy Désiré Rasolofomanana ary Rakotonirina Gervais izay tsy arako ny toerana nanendrena azy.
jentilisa, alahady 04 janoary 2009
Aiza ny zo maha-olona ny mpiasan'ny Kaominina (Antananarivo)?
2008-12-28 @ 08:26 in Andavanandro
Tsy rariny intsony fa efa tafahoatra, Tsy hoe tsy manana fampitam-baovao ilazany ny hetahetany izy ireo dia anaovana izao toeran-tsy zaka rehetra izao. Fa na tsy heno aza ny fitarainan'izy ireo ka mizaka ny mafy ireo mpiasan'ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ireo; mahatsapa ny fanimbazimbana ny zo maha-olona ihany ny tena, satria na ny voafonja aza tsy mizaka ny mafy tahaka azy ireo.
Iza amin'ny olona eto Antananarivo ka nandalo ny afovoan-tanàna indrindra izay tsy aiza fa manaraka iny araben'ny fahaleovantena na kianjan'ny 13 mey no tsy nahita ny fanosihosena ny zo maha-olombelona ireto mpiasan'ny Kaominina ireto? Fa raha ninia tsy nandeha tamin'io toerana io ianao, nefa manaraka ny vaovao an-tsarin'ny tv plus na mbs ihany dia ho kiriko tanteraka. Tsy toeram-pivoahana na fanariam-pako aza fady indrindra i Analakely. Eto Antananarivo, re tompoko, no renivohitry Madagasikara ary heverina ho tsy niserana teto Antananarivo raha tsy mandalo izany Analakely izany; koa nahoana no tsinontsinoavina tahaka izao io toerana io? Analakely no fitaratr'Antananarivo, fitaratra lehiben'i Madagasikara, ka aza hanehoana ny havoretrana tahaka izao.
Misy ny haino aman-jery manararaotra ny loton'Antananarivo, nefa soa ihany fa eo ihany koa ny mampiseho ny fiezahana ataon'ireo 20 mirahalahy manana anjara manadio an'Analakely, miasa mandritra ny tontolo andro mamafa sy mitatitra ny fako ariana fahatany eny rehetra eny. Fa nahoana no takiana ny hanafoanana ny asa an-terivozona atao amin'ny voafonja eo amin'ny lalàna nefa nahoana ireto mpiasan'ny Kaominina ireto, izay tsy voasazy na nanao heloka, na dia eo aza ny tsaho fa gadra manolotena hanadio ny tanàna ireto olona ireto mba ahafahany mivoaka ny fonja, no asaina mifitra ny diky sy ny fivalanan-drano ary ny loa (degaoba) ataonao eo afovoan'Analakely io? Tsy rariny!
Raha izao no mitohy dia ho voarombaka vetivety ny medaily volamenan'ny halotoana fa tsy medaily alimo intsony raha izao halotoan'Antananarivo izao no jerena. Tsy ny Fiadidiana ny tanàna na ny fitondrana ihany no tompon'andraikitra amin'izao fa ny mponin'Antananarivo indrindra indrindra. Inona moa no fako betsaka indrindra? tahona masikita! satria manko revy no atao ka mahalala ianao fa tsy hamafa ny loto ataonao dia ny hafa no zimbazimbaina amin'ny fanariana ireny loto ireny? Milaza fa madinika sy sahirana ve dia ny olona hafa mitovy saranga aminao ihany no asainao mizaka ny tsy eran'ny aina avela hihinana ny tadiny? Mba eritrereto ihany lahy! Aza potehina re aza fady ireny fefy iarovana ny zaridaina ireny ô! Aza potehina re aza fady indrindra ny zaridaina endriky ny tanàna e!
Mbola maro ny sazy zakain'ny mpiasan'ny Kaominina, noho ny havoretran'Antananarivo, toy ny baoritra atao lafika amin'ny entana amidy amoron-dalana sy afovoan'araben'Ambodifilao sy Behoririka. Soa ihany aza fa tsy avy ny orana tao ho ao fa raha tàn'ty nisy izany tsy mahala baoritra lena raha izay kifafa fa tanana mihitsy no manala izany baoritra lena izany. Mitaky aho: Atsaharo ny fanaovana tsinontsinona ireo mpiasan'ny Kaominina ireo fa tsy ambany zo noho ny gadralava lazaina ho manao asa an-terivozona nefa tsy manao izany tsy akory izy ireo! Raha izaho, dia famonoana ho faty no mendrika ireny olona manao tsinontsinona tafahoatra ny olon-kafa tsy nanao heloka, ho fanajana ny tanàna, hanajana ny mponin'Antananarivo, saingy tsy hanaiky izany manko ny mpandala ny zon'olombelona (indrindra fa ny zon'ireo mirehahareha fa tsy misy afaka manao na inona na inona azy ireo amin'ny hadalana izay ataony ka manadino ny zon'ny olona tsotra miezaka manao ny marina).
Jentilisa, 28 desambra 2008
Sary nalaina teny Ivato nandritra ny fahamaizana hotely kintana dimy!
2008-12-22 @ 21:04 in Andavanandro
Alatsinainy 22 desambra 2008, tokony ho tamin'ny sivy ora maraina teo, noho ny antso nisesisesy tamin'ny kidaona maraina dia tsy tana ny tena fa lasa izao. Lasa tsy misy afa-tsy io no resaky ny olona. Ahoana ny fandehany? Fanontaniana no mifamahofaho satria tsy mahita mivantana avokoa tsinona. Misy milaza ny alahelony sahady ny avy any amin'ny farintany (araka ny nolazainy) satria toa karazana fanimbam-poto-drafitr'asa indray izao. Hamonjy ny fiara fitaterana mankeny Ivato. Hazakazaka madinika nankeny amin'ny Vatobe hiala amin'i 67ha ho any Andohatapenaka io. Teo no nandray fiara. Tsy fiara manokana no nandehanana fa dia manaraka ny onjany eny na dia maika dia maika aza. Azo lazaina fa tsy tokony ho tara loatra aho tsinona satria henjana dia henjana ny fitohanan'ny fiara amin'izao ankatoky ny fetin'ny faran'ny taona izao. Niresaka tamin'ny olona tao anatin'ny fiara aho fa tsy te-hino ny fijery azy rehetra.
Tonga eo amin'ny fiolahana ho eny Ambohitrinimanjaka iny amin'izay, nanomboka hita ilay hotely lehibe... io tokoa fa misy setroka mainty taty amin'ny lafiny andrefana. Tsy dia midonaka manao ahoana fa hita ihany. Tsy hitan'ny fakantsariko fa dia aleo mionona manakaiky azy araka izay azo atao ihany. Tena tsy rariny kosa izao, hoy ilay resevera, fa dia tsy azo asiana zavatra tsara mihitsy ve aty amin'ny tanàna? Tsy hanaiky an'izao kosa aho, hoy izy nanohy ny teniny. Samy miha-miakatra hafanana ihany izany ny tsirairay koa!
Tonga hanakaiky ny masoivoho Amerikana vaovao. Niantsona indray ny fiara. Indreny ny andiana fiaran'ny mpamonjy voina an'Antananarivo renivohitra voalohany hamonjy an'Ivato. "Ironie du sort" hoy ny tao amin'ny radio viva tamin'io fotoana io, satria araka ny hanilikilihana an'Antananarivo no hitadiavam-pamonjena avy aminy. Nandeha avy hatrany anefa ny fampitandremana, nataon'ny mpanentana sy ireo mpiantso mba tsy hilaza fifaliana amin'izao toe-javatra izao mihitsy isika na hilaza fa valim-bavaka izao manjo ny hotely kintana dimy izao (fa inona tokoa aloha ny anaran'izy io e?). Aoka, hoy ny mpanentana ho hendry mandrakariva, hilamina tsara fandrao avy amin'ny vava tsy ambina no hanakatonana ihany koa ity radio ity.
Eny an-dalan'ny eny Talatamaty, indreo ny zatovolahy mitodika avokoa any amin'ny heverina ho toerana misy ilay hotely. Mazava loatra fa eny ny masony. Ny resaka ataony indray aloha tsy fantatra ny amin'izay. Ela ny ela tonga akaikin'ny fiatoana ho eny amin'ny hotely ihany. Vao tafala ny fiara dia indreny indray ny fiaran'ny Mpamonjy voina an'Antananarivo renivohitra hafa midodododo avy any.
Vao tsy nandingana lavitra akory aho dia heno ihany koa ny hafa misasasasa aok'izany. Na iza na iza kosa tsy misy afaka ny mikimpy intsony amin'ny fikoropahana misy. Maneno avokoa manko ny karazana anjomara rehetra tamin'iny lalana mankeny Ivato iny. Eny ny an'ny mpamonjy voina, eo koa ny an'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny, na vahiny na tompontany, miaramila sy sivily, nandalo koa manko ny an'ny etamazaoro. Ny mahatsikaiky aza dia mbola misy ny tsy mahalala ny fiviliana akory fa misosososo any ka efa lasa lavidavitra kely vao tonga saina miverindalana.
Tsy ny mpamonjy voinan'Antananarivo renivohitra ihany tsy akory no nandeha nankeny fa ny an'ny Asecna no tonga voalohany ary ity tazana amin'ny sary miloko mavomavo ity aza dia efa fiverenany fanindroany sahady. Soa ihany hoy ny anankiray izay fa nisy ireny famonoana afo mousse ireny ny azy ireto fa raha izay rano toa tsy hahavita hamono ilay afo mirehitra ao amin'ny hotely. Karazan'ny niara-nitontona tamin'ny masoivoho Shinoa ihany aho raha atao hoe ny vavahady no fetra.
Fa maninona i jentilisa no mbola tsy miditra foana? Tsy hoe tsy miditra izy fa tsy tafiditra. Tsy manana alalana hiditra aho satria tsy mpanao gazety. Lasan'eritreritra teo aho. Ahoana no ataoko? Andeha aho hamonjy iny lalana manoloana ny La Hutte Canadiennne iny. Hitady lalana na fidirana hafa aho izany. Toga teto amin'ity toerana amin'ny sary ity aho dia mahatadidy tsara amin'izay fa tsy misy lalankely mitsofoka miantsinana any fa lalana mizotra ho any an-tanànan'Ivato tsena izay lavitra dia lavitra ny mankeny. Hiverindalana aho dia nipika sary indray, asa raha mba tsikaritrareo ilay setroka na tsia fa nandrahona be koa moa ny andro ka ahiako tsy voaavaka an-tsary ilay izy.
Dia niverina nankeny amin'ny vavahady fidirana indray aho mieritreritra lalina izay fomba idirako amin'ity toerana ity. Nopihako indray aloha ny sary. Ataoko fa hitanareo ny setroka. Ny hita izany hatramin'izao dia setroka fa tsy mahita afo midedadeda izany isika. Vao teo ampiandohana rahateo ny afo dia efa velona ny fanairana. Ny rehetra aloha izany izao dia samy mahita fa misy raha ao, mifanontany amin'izay zavamisy marina nefa samy tsy mahalala ihany koa. mazava ho azy fa ny tombatombana no betsaka nefa tsy hahalalana izay tena marina izany. Afaka fotoana fohy toa efa nitsahatra ihany ilay setroka mainty teo. Dia ahoana? vita ve? levona ve ny afo?
Mbola mivezivezy ihany anefa ny mpamonjy voina roa tonta, Ivato sy Antananarivo renivohitra amin'ny fahatongavana sy fandehanana haka rano. Izay fiara lany rano na Antananarivo na Ivato dia samy mizotra ho any amin'ny seranana avokoa. Lavitra loatra kosa aloha raha hitodi-doha ho aty Antananarivo e!
Dia lasa indray aho nitady lalana ka tsy atoroko indray aloha ny lalana fa tsy maintsy hoe lalankely miatsinanana mitady izay hanakaikezana an'ilay trano avo ihany io. Nivezivezy tany aho ka gaga fa karazana cité ihany izao izorako izao fa izy lalantany, lalampotaka fotsiny no diavina. Nahita tamboho somary ivaiva izay aho. indro hitako tsara amin'izay ilay toerana. Nopihako ny sary raha vao nahatazana tsara aho. Efa milamina izany tanàna izany, hoy aho anankampo, saingy dia vitan'izay fotsiny ve?
Lasan'eritreritra lalina aho, sao dia fanodinan-dresaka ihany koa ary izy ity. Toa ny fanafenan-javatra tsinona no tena betsaka. Tsy misy na inona na inona fantatra amin'ity raharaha ity. Indreny eny ny praiminisitra sy ny mpiara-dia aminy fa mizotra manatona tsimoramora ilay toeram-pivoriana iraisam-pirenena. Sambany aho vao nahita an'io mivantana ary raha tsy ity toe-javatra ity tsy nieriteritra izay hahitana azy aho. Ary efa vonona eo ambaravarana ihany koa ny mpamonjy voina. Gaga aho, fa angaha ahiana ho may koa ity toeram-pivoriana ity no asiana io fantsona io sahady? Tena aleo tokoa aloha misoroka e! Mba manararaotra hitsidika ilay toeram-pivoriana indray angaha ny ry zareo izany, hoy aho.
Indreo indray koa ny mpiasa miakanjo jaky izay raha tazanin-davitra dia voavinavina ho Shinoa avokoa, anjatony maro fa nalahatra teo an-tokotaniben'ny toeram-pivoriana. Milahatra tokoa moa ry zalahy. Hay moa ny anton'izany rehefa narahina ny vaovao hariva dia noho ny sakatsakana ataon'izy rehetra na Shinoa ambony na mpiasa tsotra tsy hamelana hakana sary ny faritra. Nisy savorovoro kely mihitsy teo amin'ny mpanao gazety malagasy (izay narovan'ny mpiasa malagasy teo an-toerana tsy hokitihin-dry zalahy vahiny) sy ny mpiasa Shinoa na tompon'andraikitra Shinoa eo amin'ny fanamboarana izany na ireo mpiasa tsotra. Efa nisy fifanosehana mihitsy ka tompon'andraikitra ambony Shinoa iray no nampitony ireo mpiasa Shinoa vao nilamindamin-dratsy ny raharaha. Ny fampivoriana an-dry zalahy teo izany dia ny hanesorana azy tsy hanelingelina ny vahiny loatra satria mety ho tsy fantatry ry zalahy akory izay olona atosiny na Minisitra na mpanao gazety. Misy ry zalahy no lasa nivoaka ny faritra fanamboarana,moa misy ny namonjy nipetrapetraka lavidavitra teny.
Inona indray no hataoko? Hitsambikina ity tamboho ity ve aho? Jereko izay tao anatiny ka tsy misy taitra. Lasa izao, niditra tao anaty faritra aho. Tsy misy hazakazaka izany na dia aty amin'ny toerana tsy misy olona aza no misy ahy ary hotsikaritra avy hatrany aza ny fidirako. Tsy raharahako izany fa dia nizotra tsy taitra aho. Mizotra nankeny amin'ny fitobian'ny fiara aho. Nopihako sary vetivety ilay trano fandraisna fivoriana; ahiako ho tsy azo alaina sary manko io (ary tsy mamela tokoa ny mpiambina rehefa saiky haka sary izaho sy ireo mpanao gazety fantatro endrika). Io izany izy io e! mahafinaritra ihany ilay toerana! io koa ny baobab kely iray nalaina tany amin'ny faritra andrefana tany. Misy mpiandraikitra ny filaminana iray izay somary nivandravandra ahy, satria tsinjoko nahatsikaritra ny nakako ny sary izy. Mody tsy taitra mihitsy anefa aho.
Tsy afaka miroso lavitra intsony aho satria be vavahady koa hay ity toerana ity an! Anarany fotsiny aho no tafiditra tetsy fa tsy maintsy handika sakana maro hafa koa raha tena sahy. Nefa mety ho fahasahiam-poana izany fa ilaina ihany ny mitandrina. Lasa aho nitodi-doha nody amin'izay satria miandry koa ny asa ka ho tratra aoraina eo. Vao tafavoaka kely ny vavahay indray aho dianifanena tamina ankizy tao amin'ny foko blog club. Niara-niverina indray izahay. Tafiditra soa aman-tsara tamin'ny toerana akakiky indrindra aho. Saingy tsy mahita setroka intsony mazava loatra. Raikitra amin'izay ny fakana sary. Manararaotra araka izay mety eo.
Raha ny filazan'ny mpiandraikitra ny mpamonjy voina avy taty Antananarivo renivohitra ary (Kolonely Andrianaivo Jaona) dia miisa 25 eo ho eo ry zareo no nanao ny asany taty Ivato. Olona telo no sempotra tao ary shinoa avokoa ireo. Tsy nisy aloha ny aina nafoy. Heverina ho court circuit no nahatonga ny afo ka nahatratra ny (kidoro) eponge maro sy takela-kazo notehirizina tao amin'ny 2eme sous-sol na ny farany ambany indrindra araka ny filazany, izay no mahatonga io setroka be io. Azo lazaina izany fa efa nanenika ny trano iray manontolo ny setroka matoa efa tonga eny ambovonana araka ny fiteny mihitsy ny nivoahan'ny afo. Tsy maintsy nifandimby ny mpamonjy voina niditra satria tsy azo iaianana ao ka mitondra tavoahangivy misy rivotra iainana midina mamono afo any. Rehefa lany ny rivotra dia mivoaka iny ka misolo olona hafa indray. Tamin'ny 11 dia azo lazaina fa voafehy ny afo, tsy midika izany fa hoe maty tanteraka hoy ny tompon'andraikitra fa efa tsy miitatra intsony ilay izy aloha.
Tsy maintsy nody amin'izay aloha hisolo ankanjo hiasa... na dia maika aza ny hamoaka vaovao ny asa tsy maintsy vitaina ka izao vao nahavoaka sy nahatantara izao aminareo. Naleo ihany tara toy izay tsy nisy mihitsy e! Ka aza tsiny!
«Mialoha 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 25 26 27 Manaraka»